प्रधानमन्त्री ज्यू केहि गर्ने कि ? केन्याका बारमा नेपाली चेलीको चित्कार - Aarthiknews
प्रधानमन्त्री ज्यू केहि गर्ने कि ? केन्याका बारमा नेपाली चेलीको चित्कार
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले बिहीबार यस्तो ट्वीट गरे– ‘दशकदेखिको समस्या। केन्या र तान्जानियाका कैयन मुजरा डान्सबारमा निरन्तर सयभन्दा बढी नेपाली चेलीहरु नाचिरहेका छन्। यातना दिने, पुलिसले पक्रने यो पहिलो पटक होइन। सरकार, दूतावास सबैलाई बारम्बार जानकारी गराइएको छ। सरकारको नजर पुगोस्।’
काठमाडौं पुगेर बारमा नाच्दै केही कमाइरहेकी उनले अचानक एक एजेन्ट भेटिन्। विशाल नामको उक्त एजेन्टले भन्यो, ‘केन्या गयो भने धेरै कमाइ हुन्छ। फिल्ममा खेल्ने कलाकारको काम पाइन्छ। के गछ्र्यौ ?’ विदेश सपना उनको पनि थियो। त्यसमाथि कलाकार बन्ने अवसर ? प्रलोभनमा परिन्। केही दिनमै उनको पासपोर्ट आयो। टिकट आइपुग्यो।
त्यहाँका बारमा हिन्दी गीतमा नेपाली युवतीले नाच्ने गर्छन्। अति कम पारिश्रमिक दिँदा हुने भएकाले नेपालीको मानव तस्करी बढेको हो।
अर्की युवतीले त्यहाँको प्रहरीलाई बताएअनुसार उनीहरूलाई मासिक ‘टार्गेट’ दिइएको हुन्छ। त्यसको १० प्रतिशत पनि पारिश्रमिक दिइँदैन। ‘हामीलाई बसेको अपार्टमेन्टबाट क्लब लगिन्छ, क्लबबाट अपार्टमेन्ट’, उनले भनेकी छन्, ‘कतै निस्कन दिइँदैन। महिनामा एक दिन बिदा दिइन्छ। तर, कर्मचारीले छाड्दैनन्। अपराह्न ३ देखि ६ बजेबाहेक अरू समयमा फोन चलाउन पाइँदैन।’
थापा भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले नेपाली चेलीको चित्कार सुनेर ठोस कदम चाल्नैपर्छ। नत्र फकाएर ल्याई नारकीय जीवन जिउन बाध्य पार्ने क्रम बढिरहनेछ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।